खाद्यान्न व्यवसायीद्वारा पीडितलाई सहयोग
१३ भदौं, हेटौँडा । पर्सा जिल्लाको मधुवनका बाढीपीडित एक सय परिवारलाई प्रदान गर्न खाद्यान्न व्यवसायी संघ मकवानपुरले राहत हस्तान्तरण गरेको छ । पीडितलाई प्रदान गर्न संघले मंगलबार राहत हस्तान्तरण गरेको हो । संघ उपाध्यक्ष काव्यमणि अधिकारीले उपभोक्ता मञ्च केन्द्रीय सदस्य अजय अधिकारीलाई चामल ५ सय १० केजी, मसुरोको दाल ५० केजी, आयो नुन १ सय...
प्रगतिको कारोबार १० करोड ५० लाख
१३ भदौं, हेटौंडा । हेटौडामा रहेको प्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आव ०७३/०७४ मा करीव १० करोड ५० लाखको कारोवार गर्न सफल भएको छ । संस्थाको मंगलबार हेटौडामा भएको एघारौं बार्षिक साधारण सभाको अवसरमा कारोबारबारे जानकारी दिईएको हो । संस्थाको शैयर पूजी ५७ लाख १४ हजार, निक्षेप संकलन ४ करोड २ लाख, ५ कारेड ५० लाख, ऋण लगानीबाट व्याजबाट ८० लाख...
नारायणीद्वारा दिवंगत सदस्यका परिवारलाई सहयोग
१२ भदौं, हेटौँडा । नारायणी यातायात व्यवसायी संघले आफ्ना दिवंगत व्यवसायी सदस्य उत्तम सिंह ठकुरीको परिवारलाई एकलाख रुपैया राहत रकम हस्तान्तरण गरेको छ । सदस्य व्यवसायीको मृत्यु भएमा राहत स्वरुप एक लाख रुपैया दिने निणर्य अनुसार रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । मृतकका दाजुलाई संघका महासचिव सरोज खनालले रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । भदौं ३ गते...
मदरल्याण्डद्वारा उत्पादन र सेवाबारे जानकारी
१० भदौं, हेटौँडा । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको मदरल्याण्ड एग्रिकल्चर इण्डष्ट्रिज प्रालिले आफ्नो उत्पादन र सेवाबारे जानकारी दिएको छ । हेटौँडामा शनिबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीका संचालक जीवन तामाङले कम्पनीको उत्पादन र सेवाबारे जानकारी दिएका हुन् । कम्पनीले अहिले हात धुने ह्याण्ड सेनिटाईजर र आलुको चिप्स बजारमा ल्याएको...
शिवमका हाकिमले डन हुँ भनेपछि...
६ भदौं, हेटौँडा । हेटौँडाको हटियामा रहेको शिवम् सिमेन्ट उद्योगका हाकिमले आफु डन भएको भन्दै स्थानीयलाई धम्क्याएकोमा विरोध भएको छ । उद्योगका एचआर म्यानेजर सञ्जय सुवेदीले गएराति मादक पदार्थ सेवन गरी धम्क्याएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । सुवेदीले आफु डन भएको भन्दै आफुहरुलाई गोली हान्ने धम्की दिएको स्थानीय विक्रम महतले बताए ।...
जनकल्याणद्वारा बाढी प्रभावित सदस्यलाई सहयोग
४ भदौं, हेटौँडा । हेटौँडा–६ चौघडामा रहेको जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बाढी प्रभावित आफ्नो सदस्यलाई सहयोग गरेको छ । संस्थाले हेटौँडा–५ बानियाँटोलकी बेन्जु लामिछानेलाई खाद्यान्न र स्टेशनरी सहयोग गरेको हो । केही अघिको अविरल बर्षाका कारण आएको बाढिले क्षति पु¥याएको थियो । संस्थाका अध्यक्ष हिमाल पौडेल, उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद...
महिला जागरणको सभा सम्पन्न
४ भदौं, हेटौँडा । मकवानपुरगढी–३, मक्रान्चुलीमा रहेको महिला जागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको १९ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभामा संस्थाकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले संस्थागत प्रतिवेदन, सचिव गौरी सुवेदीले प्रगति प्रतिवेदन र कोषाभ्यक्ष शर्मिलाकुमारी घिमिरेले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । भेलामा...
महिला उद्यमीले मनाए तिज
१ भदौं, हेटौँडा । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ अन्तर्गतको महिला उद्यमी विकास समितिको आयोजनामा विहिबार हेटौंडामा तीज विशेष कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रम समितिकी सभापति निलम पाण्डेको अध्यक्षता तथा महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख शोभा शाहको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै शाहले परम्परालाई हामी सबैले परम्परा...
दूध र दुग्धपदार्थको भाउ बढयो
३२ साउन,हेटौडा। दुग्ध विकास संस्थानले दूध र दुग्धपदार्थको भाउ बढाएको छ। प्रतिलिटर दूधमा ६ रुपैयाँ भाउ बढेको संस्थानले जनाएको छ। मूल्य बढाएसँगै आधा लिटरको प्याकेटका लागि ३२ रुपैयाँ तिरिरहेका उपभोक्ताले ३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने घिउ र पनिरको मूल्य प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ बढेको छ।मुल्य बढेसगै उद्योगको भागमा ८४ पैसा र दूध बेच्ने को...
मकवानपुरमा समानुपातिकको ताजा मतपरिणाम
२६ मंसिर, हेटौँडा । मकवानपुरमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगतको मतगणना विहिबार पनि जारी छ । विहिबार...
लालकिल्लामा ‘बानियाँ विजय’ का यस्ता छन् कारण
२६ मंसिर, हेटौँडा । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि अधिकांश समय मकवानपुर लालकिल्लाको रुपमा रहेको जिल्ला हो । २०५१ मा...
हेटौँडामा खेलकुद एवं व्यापार महोत्सव हुने
२५ मंसिर, हेटौँडा । सुमन भोम्जन स्मृति खेलकुद प्रतिष्ठान मकवानपुर र औद्योगिक शान्ति नेपाल संस्थाको संयुक्त...
पराजित स्यांतानले दिए बानियाँलाई चुनौति
२५ मंसिर, हेटौँडा । मकवानपुर प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश २ बाट पराजित एमाले उम्मेदवार राजाराम...
मकवानपुरमा समानुपातिकतर्फको यस्तो छ परिणाम
२५ मंसिर, हेटौँडा । मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि एवं प्रदेश सभाको निर्वाचनको मतगणना मकवानपुरमा पनि जारी छ ।...
कसले कहाँ जिते सुचिसहित
२५ मंसिर, हेटौँडा । मंसिर १० र मंसिर २१ गरी दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनको प्रतिनिधिसभातर्फ हालसम्म १४५ ...
रेडियो अनमोलको परिक्षण शुरु
२५ मसिंर, हेटौँडा । हेटौँडामा सोमबारदेखि रेडियो अनमोल ९० मेगाहर्जले आफ्नो परिक्षण प्रसारण शुभारम्भ गरेको छ...
बानियाँको विजय जुलसमा हजारौ सहभागी (फोटो फिचर सहित)
२४ मंसिर , हेटौँडा । नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा २ को प्रदेश सभा २ बाट विजयी उम्मेदवार ईन्द्रबहादुर...
हेटौंडामा खुल्यो एक्सपर्टको शाखा
२४ मंसिर, हेटौंडा । अष्ट्रेलिया अध्ययन कसरी गर्ने भनेर अन्यौलमा रहेका पिद्यर्थीहरुको लागि मकवानपुरमा...
२५ मिटर फराकिलो पार्न डिभिजन सडकको सुचना
२७ कार्तिक, हेटौँडा । डिभिजन सडक कार्यालय मकवानपुर हेटौंडाले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा अन्तर्गत पर्ने...
आन्दोलनमा डोजरमाथि चढ्ने मै हुँ : राउत
१९ मंसिर, हेटौँडा । मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघका महासचिब महेन्द्र राउतले आगामी कार्यकालका लागि आफुले...
एमालेको प्रचारमा कर्मचारी प्रयोग
६ मंसिर, हेटौँडा । नेकपा एमाले मकवानपुरले चुनावी प्रचारप्रसारमा कर्मचारीको प्रयोग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा...
रुपचन्द्रको नाम लिंदै के भने विरोध खतिवडालाई नेता बानियाँले ?
रुपचन्द्रको नाम लिंदै के भने विरोध खतिवडालाई नेता बानियाँले ?...
बानियाँले भित्र्याए २४४ जना काँग्रेसमा
१० मंसिर, हेटौँडा । मकवानपुरको क्षेत्र नम्बर २ को २ का उम्मेदवार इन्द्रबहादुर बानियाँले यो पटकको निर्वाचनमा...
राजमार्ग हेटौँडा बजारबाट नजाने सरकारको निर्णय
१४ मंसिर, हेटौँडा । लामो समयदेखि विवादमा रहेको हेटौँडाको २५ मिटर सडक विस्तारको समस्या नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको...
कता हराए हरिबोल ?
२ मंसिर, हेटौंडा । मंसिर २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अहिले उम्मेदवारहरु...
हेटौँडा अस्पताललाई ३ सय शैयामा स्तरोन्नति
८ मंसिर, हेटौँडा । नेपाल सरकारले हेटौँडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको...
चेपाङ संघका केन्द्रिय सचिव काँग्रेसमा
१ मसिर, हेटौँडा । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ को कैलास गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ भार्तामा लोकतान्त्रिक...
Editor------Rupesh Dulal --------- 9855068230,--- Chief Reporter- Sunil Shivakoti - 9855068428